China Turbo Muffler Delete fekitori nevatengesi | Qian Iye
Ichi chigadzirwa chinyararire kudzima.
Iyi yakasviba yakasviba inogona kubvisa tuobo ruzha panguva yekutyaira kana uchiiwedzera pane iyo turbo chiutsi.
Inoshandiswa zvakanyanya muAudi akateedzana mamodheru.
Kazhinji, izvo zvekutanga zvishongedzo zvinofanirwa kudzora kuwanda kwekuita kuitira kukwezva akasiyana emapoka evatengi.
Ino yemafler kudzima yakatwasuka, isina kukanganiswa, CNC yakarongedzwa michina inoshandiswa kutsiva iyo yekutanga zvikamu.
Kazhinji kazhinji zvikamu zveOEM zvinofanirwa kubayira akasiyana maitiro ekufunga maitiro mukuyedza kukumbira kune akasiyana vatengi. Nepo munhu anofarira achiwanzoda zvirinani kusimudzira mhinduro uye nesimba rakawanda, pese paanenge achinzwa iyo turbocharger mweya, asiri-anofarira anogona kusiya izvo hunhu kuti akwire akanyarara. Muchiitiko chefekitori IHI turbocharger, turbo muffler yakamisikidzwa panzvimbo ye compressor uye yakagadzirirwa kudzikisa injini bay acoustics. Iyo Turbo Muffler Delete inotsiva iyo fekitori inogadzira chidimbu chakatwasuka, chisina kumiswa, CNC-yakagadzirirwa kubva kubillet aluminium uye anodized nhema. Kuti vave nechokwadi chekuiswa chisimbiso kwakakodzera, mainjiniya vakatora nzira mbiri. A Viton chisimbiso inosanganisirwa uye inogadzira chisimbiso pakati pechigadziko cheimba isina kugadzikana uye chidimbu chitsva. Nechisimbiso chiri panzvimbo uye yekunze flange yakaiswa, iyo isina kugadzikana yekudzima chubhu screws munzvimbo, ichigadzira izere, isingamisike nzira yekufefetera kwemhepo
Zvigadzirwa zviri pamusoro apa zvakapfuura chitupa chehunyanzvi, uye isu kwete chete tinokwanisa kugadzira zvigadzirwa zveOEM-zvakajairika asi isu tinogamuchirawo Yakagadziriswa Zvigadzirwa odha.
Pashure: Dogbone Gomo
Zvadaro: Wheel Spacer